काेरानाले १० दिनसम्म बहाेस भएका विष्णुले सारा नेपालीलाई दिए यस्ताे सुझाव, हेर्नुहाेस विस्तृतमा — Imandarmedia.com
काेरानाले १० दिनसम्म बहाेस भएका विष्णुले सारा नेपालीलाई दिए यस्ताे सुझाव, हेर्नुहाेस विस्तृतमा
बार्सिलोना । ‘म अहिले ठिक छु । सबैको कुशलताको कामना गर्दै सजग रहन अनुरोध गर्दछु । जीवनको जन्मपश्चात मृत्यु शाश्वत सत्य हो । तर, त्यो सत्यको विरोधमा हामी संघर्षशील रहिरहन्छौं । सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह हो ।’
कोरोना संक्रमण भएपछि दुईहप्ताको कष्टकर अस्पताल बसाइँबाट शनिबार घर फर्किएका स्पेन निवासी नेपाली विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका वाक्यहरु हुन् यी । स्पेनको बार्सिलोनामा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि परिवारसहित बस्दै आएका रिजालको मूल घर नेपालको अर्घाखाँची हो ।
उनलाई १० दिनसम्म सघन कक्षमा राखेर उपचार गरियो । उनको होस गुम्यो । डाक्टरहरुले पनि बचाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने ठाने । अन्ततः विष्णुले कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई जितेरै छाडे । र, समुदायकै मनोबल उच्च पार्ने गरी आशाको दियो बालेर झुल्किए ।
खासै कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि निमोनिया देखिएको छ, भन्यो । त्यहाँबाट फेरि अर्को अस्पतालमा लगियो । त्यसपछि के-के भयो मलाई केही थाहा छैन। अर्को अस्पताल गएको पनि थाहा छैन, आएको पनि थाहा छैन । हिसाब गर्दा त १४ दिनपछि पो घरमा फर्किएको रहेछु ।
अस्पतालमा छु भन्ने कहिले थाहा भयो ? – होसमा आएको त म बिहीबार साँझ मात्र हो ।
मलाई लाग्छ, अस्पतालबाट नै सर्‍यो कि । २/३ दिन अघि पनि नर्मल चेकअपका लागि अस्पताल पुगेको थिएँ । त्यसअघि १०/१२ दिन म घरबाट कतै पनि निस्केको थिइनँ । यदि पहिलेदेखि नै म संक्रमित थिएँ भने मेरो परिवारमा अन्यलाई पनि सरिसक्थ्यो । तर, त्यसो भएन । नर्मल चेकअपमा जाँदा म अस्पतालमा नै अन्य बिरामीबाट संक्रमित भएँ कि भन्ने लाग्छ । तर, रोग नै यस्तो पर्‍यो, यकिन नै गर्न त कहाँ सकियो र ? तर, मेरो सुझाव के छ भने, अस्पतालमा पुग्दा वा कसैलाई लिएर जाँदा सुरक्षित भएर जानुहोला। अन्य ठाउँमा भन्दा बढी सजगता अपनाउनुहोला।
डाक्टरले भनेजस्तै म आफ्नै उच्च मनोबलले बाँचेको हुँ । नयाँ जीवन पाएको छु । कोरोनाबाट जो कोही पनि संक्रमित हुनसक्छ । विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु संक्रमित भएको सुनेँ । उनीहरुले पनि आफ्नो अवस्था सार्वजनिक गरेका रहेछन् । यो लुकाउने रोग नै होइन । सही जानकारी दिन सकेमात्र धेरैको जीवन बचाउन सकिन्छ ।
मलाई त्यस्तो भयो भन्ने थाहा पाएपछि हामी पनि आइसोलेसनमा छौं भन्दै थुप्रैले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँहरुलाई म केही पनि भन्दिनँ । तर, नेपाली समाजको मनोबल उच्च बनाउन आफ्नोबारे बताइदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिन्छु । आफूलाई सार्वजनिक गर्नै नसके पनि संक्रमित हुनुपूर्व भेटघाट गरेका साथीभाइहरुलाई तत्काल खबर गरिदिनुपर्छ ।
जस्तो-मेरो उदाहरण दिउँ, तीन हप्तादेखि लकडाउनको अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका थिए । एम्बुलेन्सको सेवा पाउन निकै गाह्रो थियो । घर फर्काउन पनि चुनौती थियो। हप्तौंदेखि सबैजना घरभित्रै छन् । बाहिर निस्कँदा सबैले जोखिम नै ठान्दछन् । तर, कास्की मूल घर भएका सन्दीप मोहन भट्टराई मलाई लिन गाडी नै लिएर अस्पतालसम्म आउनुभयो ।
साथीभाइलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगरे कहिले गर्ने भनेर आफू पूर्ण सुरक्षित रहेर मलाई सहयोग गर्नुभयो । अर्को कुरा, कोरोना लाग्दैमा डराउनुपर्दैन । विश्वभर धेरै मानिसहरु कोरोना लागेपछि पनि बाँचेका छन् । मृत्यु हुनेभन्दा उपचारपछि निको हुने बिरामीहरु धेरै छन् । त्यसैले नआत्तिऔं । सकारात्मक सोच राख्ने बानी बसालौं र मनोबल उच्च राखौं भन्न चाहन्छु ।
जीवनको जन्मपश्चात् मृत्यु साश्वत सत्य हो । तर, त्यो सत्यको विरोधमा हामी संघर्षशील रहिरहन्छौं । सायद यही नै जीवनप्रतिको मोह हो । लगभग म मृत घोषित बिरामी जस्तै थिएँ । साथीभाइसँग भएका वैमनस्यतादेखि लिएर सबै कुरा भुलिँदोरहेछ । मेरो उद्देश्यप्रति समर्पित भएर आफू बाँच्नैपर्छ भनेर आफैंसँग संघर्ष गरेँ । त्यही मनोबलले मलाई नयाँ जीवन दियो ।
(समय सान्दर्भिक भएकाले हामीले याे सामाग्री अनलाइनखबरबाट साभार गरेका हाैं । जसकाे लिंक यहाँ छ : https://www.onlinekhabar.com/2020/04/851343)